inqubomgomo yobumfihlo - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, Vjs, i-nightclub 2019
Njengabaqhubi bewebhu abaningi, i-NYECountdown, i-llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), iqoqa ulwazi olungabonakali lomuntu siqu olufana neziphequluli zewebhu kanye namaseva ngokuvamile akwenza ukuthi atholakale, njengohlobo lwesiphequluli, ukukhetha ulimi, indawo yokubhekisela, kanye usuku kanye nesikhathi sesicelo ngasinye se-isivakashi. Inhloso ye-NYECOUNTDOWN, LLC ukuqoqa imininingwane engeyona yomuntu siqu ukuqonda kangcono ukuthi izivakashi ze-NYECOUNTDOWN, LLC zisebenzisa kanjani iwebhusayithi yayo. Ngezikhathi ezithile, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingakhipha ulwazi olungabonakali ngabanye ngokubambisana, isib, ngokushicilela umbiko mayelana nemikhuba ekusetshenzisweni kwewebhusayithi yayo. I-NYECOUNTDOWN, LLC iphinda iqoqe ulwazi olungase lukwazi ukukhomba umuntu njenge-Inthanethi Protocol (IP) amakheli abasebenzisi abangene ngemvume nabasebenzisi abashiya amazwana kuma-blogs e-WordPress.com. I-NYECOUNTDOWN, LLC iveza kuphela ukungena ngemvume kumakheli kanye namazwana e-IP amakheli ngaphansi kwezimo ezifanayo ezisetshenziselwa futhi zidalula ulwazi lokukhomba ngokwezifiso njengoba kuchaziwe ngezansi, ngaphandle kokuthi amakheli e-blog amazwana e-IP namakheli e-imeyili abonakala futhi adalulwe kubaphathi bebhulogi lapho amazwana ashiywe.
Izivakashi ezithile kumawebhusayithi we-NYECOUNTDOWN, LLC zikhetha ukuxhumana no-NYECOUNTDOWN, LLC ngezindlela ezidinga i-NYECOUNTDOWN, LLC ukuze ziqoqe ulwazi lokukhomba umuntu siqu. Inani kanye nohlobo lwolwazi ukuthi i-NYECOUNTDOWN, LLC iqoqa kuncike ekutheni ukuxhumana kusebenza kanjani. Abantu noma izinhlangano zingase zikwazi ukubandakanya ukuthengiselana nge-NYECOUNTDOWN, LLC zicelwa ukuba zinikeze ulwazi olwengeziwe, kubandakanya uma kunesidingo ulwazi lomuntu siqu nolwezimali oludingekayo ukucubungula lezo zintengiselwano. Esimeni ngasinye, i-NYECOUNTDOWN, LLC iqoqa ulwazi olunjalo kuphela uma kudingekile noma kufanelekile ukufeza inhloso yokuxhumana komvakashi ne-NYECOUNTDOWN, LLC. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayidalule ulwazi lomuntu siqu lokukhomba ngaphandle kokuchazwe ngezansi. Futhi izivakashi zingenqaba njalo ukunikeza imininingwane yokukhomba yomuntu siqu, ne-caveat engavimbela ukuba bangene emisebenzini ethile ephathelene newebhusayithi. Njengoba unikezwe ngamazwe amawebhusayithi we-Operators, ulwazi lomuntu siqu lungabonakala kubantu abangaphandle kwezwe lakini, kuhlanganise nabantu emazweni imithetho nemigomo yemfihlo yangakini ebona ukuthi ayilutho ekuqinisekiseni izinga elifanele lokuvikela lolo lwazi. Uma ungaqiniseki ukuthi le Nqubomgomo Yobumfihlo iphikisana nemithetho yendawo esebenzayo, akufanele uhambise ulwazi lwakho. Uma ukhona ngaphakathi kwe-European Union, kufanele uqaphele ukuthi ulwazi lwakho luzodluliselwa e-United States, elibhekwa yiYurophu YaseYurophu ukuba ibe nokuvikelwa kokwanele kwedatha. Noma kunjalo, ngokuhambisana nemithetho yendawo esebenzisa i-European Union Directive 95 / 46 / EC ye-24 Okthoba 1995 ("I-EU Yezokuqondisa Ngokwemfihlo") ekuvikeleni abantu ngabanye mayelana nokucubungula idatha yomuntu siqu nokuhamba ngokukhululekile kwedatha, abantu ngabanye etholakala emazweni angaphandle kwe-United States of America athumela ulwazi lomuntu siqu ngaleyo ndlela avuma ukusetshenziswa okujwayelekile kolwazi olunjengoba luhlinzekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo nokudluliselwa kwayo kanye / noma ukugcinwa e-United States of America.
Ababhalisile bakhuthazwa, kepha akudingeki, ukungena ulwazi mayelana nabo, okungaboniswa nge-akhawunti yabo. Okwamanje, sizobonisa kuphela ngaphakathi kwenethiwekhi yethu ye-Subscriber, "Igama lakho lesidlaliso" nomuzi lapho ukhona khona. Uma ungafuni ukuthi ulwazi lendawo yakho luboniswe, ungalufaki uma uqedela ifomu lakho lelwazi lokubhalisa.
I-NYECOUNTDOWN, LLC izimisele ukuvikela ubumfihlo bezingane, ikakhulukazi labo abangaphansi kwe-13. Njengoba i-NYECOUNTDOWN, LLC ikhuthaza abazali nabanakekeli ukuba bahileleke ngokugcwele ekuphequleni nasekuthandeni kwezingane zabo kwi-inthanethi. I-NYECOUNTDOWN, LLC ayiqokeleli ngenhloso ulwazi oluvela kubantwana. Ngaphezu kwalokho, i-NYECOUNTDOWN, LLC ayihlose iSayithi layo kubantwana.
• udinga ukwazi lolu lwazi ukuze uluqaphele ku-NYECOUNTDOWN, LLC noma uhlinzeke ngezinsizakalo ezitholakala kumawebhusayithi we-NYECOUNTDOWN, LLC, futhi
• abavumelene ukungabonakali kwabanye.
Ezinye zalabo basebenzi, izinkontileka nezinhlangano ezihlangene zingase zibe ngaphandle kwezwe lakini; ngokusebenzisa amawebhusayithi we-NYECOUNTDOWN, LLC, uvumela ukudluliselwa kolwazi olunjalo kubo. I-NYECOUNTDOWN, LLC ngeke iqashe noma idayise ulwazi lokuzikhomba kanye nolwazi lomuntu siqu kunoma ubani. Okunye kunabasebenzi bayo, izinkontileka nezinhlangano ezihlanganyelwe, njengoba kuchaziwe ngenhla, i-NYECOUNTDOWN, LLC iveza ulwazi olungabonakalisa umuntu siqu kanye nolwazi oluqondene nomuntu siqu ngokuphendula i-subpoena, umyalo wenkantolo noma esinye isicelo sikahulumeni, noma uma i-NYECOUNTDOWN, LLC ikholelwa ezinhle ukholo lokuthi ukudalulwa kuyadingeka ngokufanele ukuvikela impahla noma amalungelo ka-NYECOUNTDOWN, LLC, amaqembu wesithathu noma umphakathi jikelele. Uma ungumsebenzisi obhalisiwe wewebhusayithi ye-NYECOUNTDOWN, LLC futhi unikeze ikheli lakho le-imeyili, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingathumela nge-imeyili ngezinye izikhathi ukuze ikutshele ngezici ezintsha, unxuse impendulo yakho, noma uhlale usesikhathini ngalokho okuqhubekayo ne-NYECOUNTDOWN, LLC kanye nemikhiqizo yethu. Ngokuyinhloko sisebenzisa amabhulogi wethu womkhiqizo ehlukahlukene ukuxhumana lolu hlobo lwolwazi, ngakho silindele ukugcina lolu hlobo lwe-imeyili okungenani. Uma usithumela isicelo (isibonelo nge-imeyili yokusekela noma ngesinye sezimo zethu zempendulo), sigcina ilungelo lokushicilela ukuze sisize sicacise noma siphendule isicelo sakho noma usisize sisekele abanye abasebenzisi. I-NYECOUNTDOWN, LLC ithatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze zivikeleke ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukuguqulwa noma ukubhujiswa kolwazi olungabonakala ngabanye kanye nolwazi lomuntu siqu.
Ikhukhi iyinqwaba yokwaziswa ukuthi iwebhusayithi igcina ikhompuyutha yomvakashi, nokuthi isiphequluli somvakashi sihlinzeka kuwebhusayithi njalo lapho isivakashi sibuya. I-NYECOUNTDOWN, LLC isebenzisa amakhukhi ukusiza i-NYECOUNTDOWN, LLC ukukhomba nokulandelela izivakashi, ukusetshenziswa kwazo kwewebhusayithi ye-NYECOUNTDOWN, LLC, kanye nezintandokazi zokufinyelela kwiwebhusayithi. Izivakashi ze-NYECOUNTDOWN, LLC ezingafisi ukuba nama-cookies afakwe kumakhompyutha azo kufanele zibeke iziphequluli zazo ukwenqaba amakhukhi ngaphambi kokusebenzisa amawebhusayithi we-NYECOUNTDOWN, LLC, nokungahleleki ukuthi ezinye izici ze-NYECOUNTDOWN, LLC zingase zingasebenzi kahle ngaphandle kokusiza amakhukhi. I-NYECOUNTDOWN, LLC izoba / ngeke ihloniphe ayihambisani nezicelo.
Ngezinye izikhathi, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingayithumela i-imeyili yamaphephandaba, izimemezelo, imibhalo (ama-sms) ukuhlola noma olunye ulwazi, noma okunye ukuxhumana nawe ngenqubo ezenzakalelayo. Uma ukhetha ukungatholi noma yikuphi lokhu kuxhumana, ungakhetha ukulandela ngokulandela izinkomba ezinikezwe ngaphakathi kwezindaba ze-elekthronikhi kanye nezimemezelo, noma nge-imeyli ku-support@nyecountdown.com esibonisa isifiso sakho sokususwa kunoma yiluphi uhlu noma idatha yakho isusiwe kusuka kumasevisi we-NYECOUNTDOWN, LLC. Umbhalo (ama-sms) wokuphuma, vele uphendule ngokuthi "Phuma".
Nakuba izinguquko eziningi zingase zibe zincane, i-NYECOUNTDOWN, LLC ingashintsha Inqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile, naku-NYECOUNTDOWN, LLC kuphela. I-NYECOUNTDOWN, LLC ikhuthaza izivakashi ukuba zihlolisise leli khasi nganoma yiziphi izinguquko kwiNqubomgomo Yobumfihlo. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo kwaleli Sayithi ngemuva kokuguquka kulo Mgomo Wobumfihlo kuzokwenza ukwamukelwa kwakho kwenguquko.
Le nqubomgomo yobumfihlo izolawulwa yizinkokhelo ezifanayo kanye nemikhawulo yemfanelo njengoba itholakala ku-NYECOUNTDOWN, LLC Imigomo yokuSebenzisa njengoba isebenza futhi ngokuvunyelwe umthetho.
Le nqubomgomo yobumfihlo izolawulwa yiLungu eliBusayo elifanayo kanye neNdawo eVikelekile njengoba kutholakala kuMigomo yokuSebenzisa ye-NYECOUNTDOWN, LLC ngokulandela leyo migomo iyasebenza futhi ngokuvumelana nomthetho.